စီမံကိန္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား စုစည္းျခင္း
စီမံကိန္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္နယ္ေျမ၏ လူမႈ - စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ားအပါအ၀င္ ေလ့လာမႈဧရိယာႏွင့္ ပါတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ အမ်ိဳးသားနည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ လူဦးေရကိန္းဂဏန္း၊ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အရည္အတြက္၊ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္မ်ား၊ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ အခ်က္အလက္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ စသည္တို႔အျပင္ နယ္ေျျမေဒသ ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္၊ ႏွင့္ စီမံကိန္း၏ တန္ဖိုးတိုးးပြားေစမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုစည္းမည္။ ထို႔အျပင္ ဤစာပိုဒ္တြင္ အခ်က္အလက္ကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ေကာက္ခံထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ၃ အုပ္စု ခြဲထားသည္။
•	ျဖစ္ႏိုင္ေျခစီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ ပူးးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမူေဘာင္အရ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ စုစည္းမႈ၊
•	ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔၏ မူ၀ါဒႏွင့္ အမ်ိဳးသားဖြြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္၊
•	ေမ်ာ္မွန္းထားသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းတန္ဖိုးတိုးပြားေစမည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊
ဤစီမံကိန္းသည္ အာဆီယန္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေ၀းေျပးလမ္းမ စံခ်ိန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာက္လုပ္ေရးဒီဇိုင္းကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရမည္ သို႔မဟုတ္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေ၀းေျပးလမ္းမဌာန (DOH)၏ အဆင့္ ၄ စံညြန္းထက္မေလ်ာ့နဲေစရ။ ျမန္မာႏိုင္ငံဖက္မွ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေသာ ႏွစ္လမ္းသြားလမ္းမ ဒီဇိုင္းအေသးစိတ္ကို စီမံကိန္းအၾကံေပးသူမွ ျပန္လည္ေလ့လာ ထားသည္။ အၾကံေပးသူမွ ဤလမ္းစီမံကိန္းကို STA. ကီလိုမီတာ 16 + 458 မွစတင္ျပီး DSEZ ရိွ STA. ကီလိုမီတာ 18+500 လမ္းပိုင္းထိဆက္သြယ္ရန္ႏွင့္ STA. ကီလိုမီတာ 18+500 တြင္ျပီးဆံုးရန္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ထားသည္။ စုစုေပါင္းအကြာအေ၀းမွာ ၁၄၀.၀၄၂ ကီလိုမီတာ ျဖစ္သည္။ လမ္းေၾကာင္း၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္သည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမျပန္႔ျဖစ္ျပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ အႏွိမ့္အျမင့္ သို႔မဟုတ္ ကုန္းျမင့္ႏွင့္ ေတာင္တန္းတို႔ျဖစ္သည္။ အင္ဂ်င္နီယာ သံုးသပ္ခ်က္အရ အပိုင္း ၄ ပိုင္းရိွျပီး ၄င္းတို႔မွာ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရးဒီဇိုင္း၊ တံတားေဆာက္လုပ္ေရႏွင့္ ေရစီးေျမာင္းဒီဇိုင္း၊ လမ္းမပထ၀ီအေသးစိတ္ဒီဇိုင္းႏွင့္ တိုးဂိတ္ေကာက္ခံ သည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားရာ ေနရာမ်ား တို႔ျဖစ္သည္။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဟုတရားဝင်လူသိများသောမြန်မာနိုင်ငံသည်အရှေ့တောင်အာရှ၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ 67ရိယာ ၆၇၆,၅၇၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ (ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ၁.၃ ဆခန့်) သည်မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ၄၀ နှင့်အရှေ့တောင်အာရှတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံသည်ထိုင်းနိုင်ငံနှင့်ခရိုင် ၁၀ ခုဖြင့်ဆက်သွယ်ထားသည့်နယ်မြေအများစုမှာထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှချင်းရိုင်၊ ချင်းမိုင်၊ မဲဟောင်ဆောင်၊ တာ့၊ ကန်ချနဘူရီ၊ ရာချဘူရီ၊
ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြို့တော်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနသည်နေပြည်တော်ဖြစ်ပြီးရန်ကုန်နှင့်အလှမ်းဝေးသောကီလိုမီတာ ၃၂၀ အကွာတွင်ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည်ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးareaရိယာကိုတိုင်းဒေသကြီး (၇) ခုအဖြစ်ခွဲခြားထားပြီးလူနည်းစုလူမျိုးစုများပါဝင်သည့်ပြည်နယ် (၇) ခုနှင့်ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ (၁) ခုရှိသည်။
၂၀၀၅-၂၀၁၀ အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ရာတွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏လူ ဦး ရေတိုးတက်မှုနှုန်းသည်တစ်နှစ်လျှင် ၀.၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ၄၈.၅ သန်းမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ၅၄.၁ သန်းအထိတိုးတက်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဂျီဒီပီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် ၆၅.၄၄၆ ဘီလီယံဒေါ်လာမှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ၇၁.၂၁၅ ဘီလီယံသို့တိုးတက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်တစ် ဦး ချင်းဂျီဒီပီတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၂၀၁၄-၂၀၁၈ ခုနှစ်အကြားဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းမှာ ၅-၆% ခန့်ရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုကိုအောက်ပါအတိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။
စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာရှုထောင့် စိုက်ပျိုးရေးသည်အဓိကအားဖြင့်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဂျုံစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ကြံစိုက်ခြင်းနှင့်အခြားအပူပိုင်းဒေသများစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ပါဝင်သောမြန်မာအများစု၏အဓိကအလုပ်အကိုင်ဖြစ်သည်။
သတ္တုတွင်းအရွယ်အစား မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်ကျောက်တူးဖော်ခြင်း၊ သွပ်တူးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းရှိသံဖြူသတ္တုတူးခြင်းနှင့်သစ်တောများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကျွန်းသစ်သစ်တောနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းရှိရေနံတူးစင်များရှိသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းအရွယ်အစား ယေဘူယျအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ရန်ကုန်၊ မြိတ်နှင့်ထားဝယ်တဝိုက်ရှိလှေတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံသည်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ သစ်တော၊ တွင်းထွက်နှင့်သံဖြူကဲ့သို့သောမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
ထားဝယ်၏မြေအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာလူနေအိမ်များဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောWithရိယာများ၊ လက်ရှိနေအိမ်များ၊ သစ်သားအိမ်များ၊ဘိလပ်မြေစက်ရုံများနှင့်ဘိလပ်မြေစက်ရုံသစ်များ၏အိမ်များနှင့်အတူစီးပွားဖြစ်အဆောက်အအုံများနှင့်ဟိုတယ်များလည်းရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်၊ ရေ၊ စပါး၊ငှက်ပျောသီးနှင့်ကွမ်းစိုက်ခင်းအမြောက်အများကိုမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူတကွစိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးထားဝယ်မြို့သည်ကပ္ပလီပင်လယ်နှင့်အနောက်ဘက်hasရိယာရှိသောကြောင့်ထားဝယ်ပင်လယ်နှင့်ကပ်လျက်ရှိသောထားဝယ်သည်ထားဝယ်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ခရီးသွား attr ည့်ဆွဲဆောင်က်ဘ်ဆိုက်များ